Inja Yezempilo | Julayi 2021
Isigaba: Inja Yezempilo
Ukuphazamiseka Kofuzo Ezinja
Leli phepha liwumkhiqizo wokuqala womzamo engiwenzile owagqugquzelwa wukuthola ukuthi iScottish Terrier yethu enezinyanga ezinhlanu ubudala yahlushwa yiType III von Willebrand's Disease (vWD). Ukuba khona kwalesi sifo sokopha kolibofuzo kwakungaziwa kithina waze wahlaselwa yisiqephu esibulalayo esopha kakhulu ngaphandle kwesizathu. Ukwelashwa okulandelayo ... Funda kabanzi
Kwesinye isikhathi okubaluleke ngaphezu kohlobo lwesilwane ukuphathwa kokungezwani komzimba nesilwane. Nawa amanye amathiphu ochwepheshe angasiza.
Ukucwaninga nge-canine hip dysplasia (CHD) kusikisela ukuthi yisifo esiyinkimbinkimbi kunokucabanga kokuqala. Azikho izimpendulo ezilula noma izixazululo zenkinga.
Isifo Sezinso Sentsha
NgoJanuwari wango-1990, ngabeka phansi umdlwane wami onezinyanga ezingamashumi amabili nanye ubudala uStandard Poodle. Ubengomunye wemidlwane emithathu esencane eyishumi nanye yokufa ngeJuvenile Renal Disease. Yimithathu imidlwane enalesi sifo ibonakale iphilile futhi ikhula ngokujwayelekile kuze kube kuvela izimpawu zokwelashwa ezinyangeni eziyishumi kweyodwa, nasezinyangeni ezingamashumi amabili ... Funda kabanzi
Umhlahlandlela Wokugcina Wokwelapha I-Vaginitis ezinjeni
I-Vaginitis ezinjeni idinga ukunakekelwa okukhethekile, futhi sinakho konke okudingayo, kusuka kumathiphu kuya kumakhambi asekhaya azoqinisekisa ukuthi ingane yakho yoboya ihlala isempilweni enhle.
Thika Izifo Ezithwalwa Izinja
I-Babesiosis Kuyini: I-Babesiosis yisifo esithwalwa ngamakhaza i-hemoprotozoan (igazi). Umzimba ubizwa ngeBabesia, lesi sifo sibizwa ngeBabesiosis. Izinhlobo: I-Babesia canis, i-Babesia gibsoni Primary Vector: I-Brown Dog Tick (kufanele ifunze okungenani izinsuku ezingama-2-3 ukuze idlulise) Amanye ama-Vectors: I-Deer Tick, ukumpontshelwa igazi, izinaliti ezingcolisiwe, kanye nezinsimbi, ezokuthutha. Ukuxilongwa: Kukhona ezimbili ... Funda kabanzi
Isikhumba senja sincike ezinweleni nakowoyela ukuze sigcinwe sisesimweni esihle.
Ukuzalela, Ukuxosha, Nokukhulisa Imidlwane
Ngaphambi kokufunda ngokuqhubekayo: Ngaphambi kokuzalisa i-bitch yakho, sicela uthintane nodokotela wezilwane. Imininingwane equkethwe yile mibuzo evame ukubuzwa akufanele ithathwe nganoma iyiphi indlela njengengxenye yokunakekelwa kwezilwane nezeluleko. Ngaphezu kwalokho, kufanele wenze umzamo wokuthola udokotela wezilwane ojwayelene nezinkinga zokukhathaza i-canine. Ngoba abantu abaningi banesibopho ... Funda kabanzi
umalusi waseJalimane kanye nemingcele ye-collie collie mix
yini retching ezinjeni